नारी हुनुमा गर्व गर्छु, नकारात्मक तत्वहरुलाई ठाउँको ठाउँ तह लगाउछु ‘लगाउछु:ज्वाला संग्रौला – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
नारी हुनुमा गर्व गर्छु, नकारात्मक तत्वहरुलाई ठाउँको ठाउँ तह लगाउछु ‘लगाउछु:ज्वाला संग्रौला
हरेक व्यथिति एवम् विसङ्गतिहरुको साथै नकारात्मक कुराहरुको सहि तरिकाले खण्डन गर्दै आफ्नो सशक्त ढङ्गलेआवाजहरु बुलन्दीत गर्दै आउँनु भएकी आदरणीय राष्ट्रभक्ती अनी सामाजिक अभियन्ता ज्वाला संग्रौला ज्यु लाई नचिन्नेप्रायः कम्ती नै होलान्।
उहाँले सदैव आफ्नो भनाईहरु सही ढङ्गले अध्ययनको साथ संन्जालमा उठाउँदै आउनु भएको पाईन्छ। यत्ती मात्र हैन उहाँलाई समाजसेवी साथै लेखिका भनेर पनी कत्तीले चिन्नु हुन्छ ।
उहाँको लेखाईमा नाम अनुसारको ज्वाला झैं नै पाईन्छ । नकारात्मक तत्वहरुलाई उहाँले लेखाईको माध्यम बाट नै ठाउँकोठाउँ आछु – आछु पारेर सहि दिशामा ल्याएका धेरै नै उदाहरणहरु छन्। देशमा भएका हरेक दुखी , गरिब, पिडित एवम् राष्ट्रको निम्ती केहि गर्छु भन्ने हरुको निम्ती सदैव सहयोग साथै अभियानहरु सन्चालन गर्दै पुण्य कमाउँदै आउँनु भएको छ ।
ज्वाला ज्यु को फ्यान फलोईङ निक्कै नै रहेको पाईन्छ । त्यस मध्ये कहीँ कतै फरक विचारहरु राख्दै विरोध गर्दै विरोधी बनेको पनी पाईन्छ ।
उहाँ भन्नु हुन्छ:
संसारको सबैभन्दा कमजोर पुरुष त्यो हो जस्ले एउटी नारीसँग बैचारिक बहस, डिबेट र तर्क गर्न नसकेपछि उस्को चरित्रमाथी औंला उठाउँछ र आफू मर्द भएको फुर्ती देखाउँछ। म आफू नारी हुनुमा गर्व गर्छु किनकी मैले यो समाजका मैं हुँ भन्ने केहि थान अराजक पुरुषलाई ठाउँको ठाउँ आच्छु आच्छु पारेर , बटारेर , दोबारेर र निचोरेर फलामको चटनी चटाउँदै तिनीहरुकै साईजको डालोमा लोड गरिदिएकी छु!
अक्सर तिनै नालायकहरु हामी महिलामाथी औंला उठाउँछन्, जस्को बुद्दि र बिबेक आफ्नै चोर औंलाको नङ काट्ने जतिपनि हुँदैन..!
कसैले लेखेर परिवर्तन गराऔं , कसैले बोलेर गराऔं अनी कसैले खबरदारी गरेर गरौं । हामी सबैले मिल्यौं भने असम्भव भन्ने केही पनि हुन्न । एकतामा सबैभन्दा ठुलो बल हुन्छ भन्ने कुरालाई मनन गर्दै सकारात्मकमनहरुलाई सदैव साथ , समर्थन र हौसला प्रदान गरौं र गर्नको निम्ती प्रेरित गरौं ।
ज्वाला जी लाई मेचीमहाकाली खबर आग्रह गर्दछ की सदैव यसरी नै सशक्त ढङ्गले आवाजहरु लेख्दै अनी बुलन्दीत गर्दै राम्रो समाज हुँदै राष्ट्रको निर्माणमा टेवा पुर्याउदै जानुनुहोला । लेखन कार्यमा अझ निखारता आवोस् कामना गर्दछ ।
Previous ‘मधे’शमा पुनः ठूलो आ*न्दोलन हुन्छ’ : उपेन्द्र यादव!
Next गोकुल बास्कोटामाथि छा’नबिन गर्न ओली’द्वारा अ**स्वीकार, अब के हुन्छ?